Binance NFT Marketplace မှစတင်သည်: Andy Warhol, Salvador Dalì - Cazoo မှစုဆောင်းထားသောပစ္စည်းများ
ပင်မစာမျက်နှာ » ပင်မစာမျက်နှာ » Binance NFT Marketplace - ဆာဗေးဒေါဒါးမှအန်ဒီဝါ့ခ်ျမှစုဆောင်းထားသောပစ္စည်းများ
tag ကို: NFT, non fungible တိုကင်
အဆိုပါ NFT (Fungible Tokens) သူတို့သည်လောကကိုအောင်နိုင်ပါပြီ။ wifi ကအရမ်းဆိုးဝါးတဲ့ဂူထဲမှာမနေပါကဒီအသစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်အကြောင်းကိုသင်ကြားပြီးပြီ။
Binance လဲလှယ်ရေး (ဒီမှာစာရင်းသွင်းရန်သူတို့ကိုလင့်ထားသည် ကော်မရှင်လျှော့စျေးနှင့်! - လျှော့စျေးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ) ဇွန်လ ၂၄ ရက်ကြာသပတေးနေ့၊ ကြာသပတေးနေ့၊ ကြာသပတေးနေ့၊ Andy Warhol နှင့် Salvador Dali တို့၏ NFTs အနုပညာလက်ရာများကိုပြသမည်ဖြစ်သည်။
Andy Warhol သုံးခုကိုယ်ပိုင်ပုံတူ Binance NFT
“ Genesis” အမည်ရှိလေလံပွဲတွင် Andy Warhol ၏“ Self-Portraits သုံးခု” NFT နှင့် Salvador Dali ၏“ Divine Comedy: rebeget” ၏အသစ်ဖြစ်သော NFT ပါဝင်သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရလေလံပွဲ၏အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ "NFTs နှင့် Renaissance လှိုင်းသစ်" ဖွင့်လှစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
"NFT နည်းပညာသည်ကမ္ဘာ့အနုပညာကိုထာဝရပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအယူအဆကိုတစ်သက်တာပိုင်ဆိုင်မှုသို့ယူဆောင်လာသည် ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်” ဟုသတင်းထုတ်ပြန်သည်။ “ Genesis” လေလံပွဲသည်ဤအကြံဥာဏ်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးသမိုင်းတွင် 'ပြောင်းလဲမှုလေ' ကာလကိုကိုယ်စားပြုသောအဖိုးတန်အပိုင်းအစနှစ်ခုပါရှိသည်။
လေလံပွဲမှာလည်းပထမဆုံးကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။နက်နဲသောအရာ Box ကိုBinance NFT သည်သုံးစွဲသူများအတွက်အထူး NFTs ရယူရန်နည်းလမ်းသစ်ဖြစ်သည်။ box တစ်ခုစီကို NFT တစ်ခုထားရှိရန်အာမခံထားသည်၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများသည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ပထမဆုံး Mystery Box တွင်စုစုပေါင်း“ tokidoki” ဇာတ်ကောင် ၁၆ လုံးပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်အီတလီအနုပညာရှင် Simone Legno တီထွင်ခဲ့သောဂျပန်လူနေမှုပုံစံဖြင့်ဖန်တီးထားသောကစားစရာများဖြစ်သည်။
ဒီလေလံဟာ Binance ရဲ့မကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့တဲ့“ 100 Creators” အစီအစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး NFT စျေးကွက်ကို ဦး ဆောင်ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အနုပညာရှင် ၁၀၀ ပါဝင်ပါတယ်။ ဤရွေးချယ်ထားသောဖန်တီးသူများသာစျေးကွက်စတင်ပြီးသည့်ပထမအပတ်တွင်သူတို့၏အနုပညာလက်ရာများကိုရောင်းချနိုင်လိမ့်မည်။
Binance ယခုနှစ်Aprilပြီလအကုန်တွင် NFT နည်းပညာနှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ဈေးကွက်တစ်ခုစတင်နေပြီဟုကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်းအား NFT နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ကတိက ၀ တ်ကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်“ မဟာဗျူဟာမြောက်အပြောင်းအရွေ့” ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့ကတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး NFT ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း blockchain အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် Binance အသိုင်းအဝိုင်းမှအမြန်ဆုံး၊ အသက်သာဆုံးနှင့်လုံခြုံမှုအရှိဆုံး NFT ဖြေရှင်းနည်းများကိုမြှင့်တင်ရန် "ဟုကုမ္ပဏီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက Block ကိုပြောကြားခဲ့သည်။
အားလုံးဖော်ပြထားသောအကျင့်ကိုကျင့်အပေါ်တွေ့နိုင်ပါသည် Binance NFT စျေးကွက်.
လူအများစုကဒီလွှတ်တင်မှုဟာ Binance ရဲ့မိခင်တိုကင်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မလားဆိုတာစဉ်းစားနေကြတယ် BNB။ ဒီလွှတ်တင်မှုရဲ့နောက်ကွယ်ကစိတ်အားထက်သန်မှုကဒီလက္ခဏာသက်သေရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုးပွားစေမှာလား
BINANCE တွင်ဒင်္ဂါးပြားကို ၀ ယ်ပါ
ယခင်ဆောင်းပါးSorare မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ Ethereum ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောကမ္ဘာ့စိတ်ကူးယဉ်ဘောလုံး
လာမယ့်ဆောင်းပါးNFT အစီရင်ခံစာ- 2021 သည် ကြီးစွာသောတိုးတက်မှုနှစ်ဖြစ်သည်။